IGPS kunye noMhlaba kaGoogle kuNdibaniselwano -Geofumadas
Agasti, 2012 Ukufundisa i-CAD / GIS, Google umhlaba / imephu, GPS / Izixhobo
4 iminyaka emva kokuphonononga gvSIG kunye nokuBambisana, siyavuya ukusasaza incwadi entsha Arnalichm Umbutho weengcali ezenzelwe ukonyusa ifuthe labenzi bokusebenza kwabantu ngenkxaso yezobugcisa, iinkonzo zokubonisana noqeqesho kwicandelo lokuhambisa amanzi kunye nobunjineli beNdawo.
Sibhekisela kwincwadi entsha:
I-GPS kunye neGoogle Earth ngokuBambisana.
Olu xwebhu lugxotha kakubi inqanaba lokulula, luchaza ngemifanekiso echanekileyo, amanyathelo kunye nokusetyenziswa kwexesha lokudalwa, ukwabelana kunye nokusetyenziswa ngokubambisana kolwazi lwendawo ngokusebenzisa izixhobo ezikhoyo kwiwebhu, kubandakanya iGoogle Earth, iGoogle Amadokhumenti, i-GPS Babele, i-GPS Visualizer, iDropbox, phakathi kwezinye.
Ngokuqinisekileyo ligalelo elibalulekileyo kula maxesha xa phantse yonke into esiyenzayo inemvelaphi yophuhliso kwaye kufuneka sibonise ngendlela ebonakalayo. Nangona olu xwebhu lungajolisanga kwinqanaba elibanzi, kuyinto enqabileyo ukubona ukuba ngezixhobo ezilula ungabonisa iziphumo.
Uhlobo loxwebhu luhlanganiswe ubuncinane kwiindawo ezine ezilandelelanayo:
Eyokuqala ithetha ngeGoogle Earth, kunye nemigaqo esisiseko kulawulo lweendlela kunye nokusetyenziswa kwesixhobo. Kuyacaca ukuba eli candelo lininzi kubasebenzisi abakwinqanaba eliphakathi, nangona kunjalo umda olu hlobo loxwebhu lunokuba nawo kwimeko yabenzi bezigqibo abahlala bengabantu abanobuchule obuphezulu kwicandelo lophuhliso loluntu kodwa bengenanto hlaziya okunokwenziwa ngezixhobo ezisisiseko zekhompyuter.
Ekubeni idlala, iGoogle Earth ibe yinto exabisekileyo kwiinjongo zemfundo y bonisa Ukusetyenziswa kweenzululwazi zomhlaba ezaziza kuthi ngamanye amaxesha ziphathwe ziingcali. Kule nto, olu xwebhu lubonakala ngathi lujolise kwingqwalaselo yalo ngokubonakalayo ngezihloko ezinje ngezi:
Ukufaniswa kweengcamango zolwazi
Yakha amaphuzu, imigca kunye neepolgoni
Vula iifayile ze-kml / kmz
Ngokoluvo lwam, iyasilela ekubhekiseni kwindlela yokwenza ifayile ye-kml ngaphandle kweGoogle Earth. Ngokwesiqhelo abantu baneendidi zohlobo lwefayile yemilo, i-dwg okanye i-dxf abalindele ukuyibona kuGoogle Earth, kwaye ndicinga ukuba koku kunokubakho icandelo elikhankanyiweyo ubuncinci apho iinkqubo zinokwenziwa khona.
Isahluko sesibini sigxile ekusetyenzisweni kweGPS, nenqanaba elibanzi labo banokuwuthatha kancinci umxholo wesahluko sokuqala. Imiba esisiseko, icaciswe kakuhle, njengoko ikho kwamanye amaxwebhu; kodwa ixabiso elongeziweyo kukudibana kwezihloko, kuba ngaphandle kokuba ikopi / uncamathisele kugxila kubulula babo bangaziyo ngesifundo kodwa banexesha elincinci lokuwuqonda.
Ngaphandle kwezihloko ezisisiseko zemifanekiso, imbonakalo, i-theory ye-navigation, ukusetyenziswa kunye nokucwangciswa kwe-GPS, into enomdla kakhulu unxibelelwano wayo kunye neGoogle Earth ngokuqhubeka nomxholo wesahluko sokuqala. Kulabo baqala kwintsimi yeGPS eli candelo lihle kakhulu, umgudu omkhulu wokushwankathela izinto ezibaluleke kakhulu kwiingxaki kunye nokuzikhupha kwiqondo lobugcisa, elifanelekileyo kunye nexesha.
Isahluko sesithathu sisenzo nje kuphela esiya kwinqanaba lobunzima, ukususela ekudalweni kwamacandelo ukuya kusetyenziso oluphambili lwe-Excel kwiifomula zoqhagamshelwano kwiimephu ezipapashwe kwi-intanethi kwiifayile ze-csv.
Kule nqanaba, abasebenzisi abacinga ukuba bayazi yonke into malunga neGoogle Earth bangamangaliswa, kuba kubonisa indlela yokwenza iifolda okanye umgca oqulethwe kwi-kmz kwaye obonakalayo xa umgca ubonakala kwiGoogle Earth.
Yabelana kwaye ubambisane
Okokugqibela, icacisa ukuba ungasebenza njani ngokubambisana usebenzisa i-Intanethi.
Ekugqibeleni: Umnikelo obalulekileyo apho sonke siya kufumana into entsha, kodwa ngaphezu kwayo yonke into esinokuyibangela abantu abangaqalwanga kule ntsimi ukuba banomdla kwi-geography.
Ndiyincoma ukuba ukhangele kwaye uyigcine kwiintandokazi zakho ngenxa yokuba akusiyo yonke imihla ezi ndaba zifike kwaye zihlale zixhumeke kwi-intanethi.
Apha ungathenga incwadi http://www.arnalich.com/es/goops.html
Apha unako funda kwi-intanethi
Ukusetyenziswa kweencwadi kunokuba khuphela apha
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ikhosi ye-GvSIG isetyenziswe kuCwangciso loThutho
Post Next Iipekseli zakutshanjeOkulandelayo »